कसरी व्यापार गर्न | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
तपाईंको आफ्नै व्यवसाय कसरी बनाउने सिक्न
के तपाईं कहिल्यै व्यापार कसरी बनाउने सिक्न चाहन्थे छन्? तपाईंको आफ्नै व्यवसाय भइरहेको स्वतन्त्र हुन र आफ्नो समुदायमा थप मगनी बन्न ठूलो तरिका हो. यहाँ दस कदम हो के तपाईं व्यापार गर्न लाग्न सक्छ:
एक महान विचार संग शुरू! संसारमा व्यापार विचार को धेरै छन्, त्यसैले यसलाई महत्त्वपूर्ण समय लिन आफ्नो अद्वितीय विचार संग आउन छ. तपाईं बजार मा भेट छैन भइरहेको एक मांग हेर्न भने एक व्यापार सुरु गर्न अर्को राम्रो कारण छ. त्यहाँ यसको लागि मांग छ भने, शायद तिमी एक सफल व्यवसाय आफ्नो विचार गर्न सक्नुहुन्छ. एक बजार अनुसन्धान सञ्चालन पनि आफ्नो उत्पादन वा सेवाको लागि एक मांग छ भने तपाईं देख्न दिनु हुनेछ. तपाईं उद्योग बारेमा जानकारी भेला गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राहकहरु, र आफ्नो व्यापार सुरु गर्न को लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँ. बजार अनुसन्धान केही उदाहरणहरू सर्वेक्षण हो, साक्षात्कार, र ध्यान समूह.
2. आफ्नो कौशल आकलन
के तपाईं व्यापार सुरु गर्नु अघि, तपाईं आफैलाई सोध्न आवश्यक: आफ्नो कौशल के हुन्? के तपाईं गरिरहेको मन? तपाईं बस पैसा बनाउन व्यापार मा छैन जानु पर्छ, त्यसैले तपाईंलाई चासो छ कि एक क्षेत्र छनोट. तपाईं केहि पाउन पछि भनेर चासो, तपाईं आवश्यक कौशल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सेट छ भने इमानदार आकलन गर्न समय लाग्न. तपाईं पर्याप्त ज्ञान र अनुभव प्रभावकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न छन्? यदि तपाईं, तपाईं अगाडि सक्छन् र काम मा डुबुल्की मार्न र साथ जाने रूपमा सिक्न. तर तपाईं कुनै पनि कौशल वा पर्याप्त ज्ञान छैन भने, त्यहाँ स्रोतहरू धेरै तपाईं खाली बन्द गर्न मद्दत छ. तपाईं व्यापार प्रशासन मा पुस्तकहरू भाडामा आफ्नो स्थानीय पुस्तकालयमा जान सक्नुहुन्छ, अनलाइन कक्षाहरू लिन, वा उद्यमशीलता घटनाहरू सामेल. यसो गर्दा तपाईं जीवन आफ्नो विचार ल्याउन मद्दत गर्ने सही मान्छे फेला पार्न मद्दत गर्नेछ.
एउटा व्यवसाय योजना तपाईंको व्यापार लक्ष्य दिइएको एक पुस्तिका हो र तपाईंले कसरी तिनीहरूलाई हासिल गर्ने योजना. यसलाई तपाईंको व्यापार को प्रमुख तत्व पहिचान किनभने व्यवसाय योजना भइरहेको आवश्यक छ. तपाईं आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न समर्थन आवश्यक छ भने, तपाईं आफ्नो व्यवसाय नैतिक वा आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक हुन सक्छ गर्ने मानिसहरूलाई योजना देखाउन सक्छौं.
तपाईं पनि एक नारा चयन गर्न सक्नुहुन्छ, वा ट्यागलाइन, जो आफ्नो अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव हुन सक्छ (खासियत). खासियत अरू सबैलाई आफ्नो व्यवसाय भेद प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक रणनीति हो. यो तपाईं अनुपम हुनुपर्छ, र तपाईंले यसलाई प्रमाणित र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ. यो मान्छे को सम्झना र ग्राहकहरु प्राप्त हुनेछ फाइदाको राज्य हुनुपर्छ सक्ने एउटा छोटो वाक्यांश हुनुपर्छ.
दोश्रो, तपाईं आफ्नो व्यापार को लागि एक स्थान फेला पार्न आवश्यक. व्यापार को आफ्नो प्रकार आधारमा, आफ्नो स्थान पनि आफ्नो व्यापार को सफलता असर गर्न सक्छ. तपाईं अनुसन्धान निश्चित र सही स्थान फेला. केही अवस्थामा, सस्ता स्थान पैसा बचत गर्न सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ. अन्य अवस्थामा, मान्छे तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं एक प्रमुख स्थानमा छन् जबसम्म तपाईं सफल छैन.
त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा कारोबार धेरै प्रकार छन्. तिनीहरूले विभिन्न आवश्यकताहरू र संरचना छ. कारोबार को सबै भन्दा सामान्य प्रकार छन्; एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम, र सीमित दायित्व कम्पनी. यसलाई तपाईंको व्यापार संरचना स्थापना गर्न आउँदा ती सबै र बेफाइदा छ. महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न तपाईंको व्यापार आवश्यकता के हो र सही व्यापार संरचना छान्ने तपाईंको व्यापार आवश्यकता फिट हुनेछ छ. सिक्न बारेमा थप व्यापार संरचना.
आफ्नो व्यवसाय को नाम दर्ता आफ्नो राज्य संग, त्यसैले यसलाई कानुनी निकाय बन्दछ र (प्रायजसो) एउटै नाम अन्तर्गत व्यापार गरिरहेको देखि अवस्थामा अरूलाई बन्द हुनेछ.
तपाईंको संघीय र राज्य को लागि लागू कर ID संख्या. तपाईं कर तिर्न यी संख्या आवश्यक हुनेछ. तपाईंको संघीय कर ID नम्बर पनि आफ्नो रोजगारदाता पहिचान नम्बर भनिन्छ (एक) र आईआरएस द्वारा जारी छ. आफ्नो राज्य कर ID नम्बर राज्य कर तिर्नुपर्ने छ र आफ्नो राज्य द्वारा जारी छ. (एकमात्र proprietors राज्य आईडी नम्बर आवश्यक छैन।)
धेरै कारोबार आवश्यक लाइसेन्स र परमिट कानुनी रूपमा आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न. संघीय र राज्य परमिट बाहिर खोज्न र कानुनी रूपमा आफ्नो व्यापार खोल्न आवश्यक लाइसेन्स.
तपाईं आफ्नो कम्पनी को नाम रक्षा गर्नुपर्छ, सामान, वा सेवा? तिमी सक्छौ ट्रेडमार्क यी त संयुक्त राज्य अमेरिका मा अरू कसैले तिनीहरूलाई प्रयोग. तपाईं अर्को व्यवसाय ट्रेडमार्क नाम प्रयोग गर्न निश्चित गर्न जाँच गर्नुपर्छ.
7. तपाईंको व्यापार वित्त
तपाईंको व्यापार वित्त गर्न पैसा फेला एक उद्यमी को लागि एक ठूलो चुनौती छ. तपाईंले आफ्नो बचत रूपमा स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन सक्छ, वा परिवार र साथीहरूबाट लगानी. वा तपाईंले बैंक बाट ऋण लागि लागू हुन सक्छ. यो सही बैंक आफ्नो वित्तीय भविष्य व्यवस्थापन गर्न मद्दत र व्यापार बैंक खाता खोल्न पाउन जो मा बिन्दु छ.
एक पटक तपाईं आफ्नो व्यवसाय खोल्न पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू छन्, यो सेट अप समय. तपाईंको व्यापार आधारमा, तपाईं एक कार्यालय आवश्यक पर्दछ, स्टोर, वा अन्य परिसर. के तपाईं खरिद वा आफ्नो व्यापार को लागि ठाउँ पट्टा भने निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ.
तपाईं प्राप्त आफ्नो कार्यालय वा स्टोर सेट अप पछि, त्यसपछि आफ्नो उत्पादन र सेवा ल्याउन को कठिन काम सुरु. तपाईं यसलाई आफ्नो ग्राहकहरु अपिल छ त सबै सेट अप गर्न कडा परिश्रम गर्न आवश्यक. तपाईं पनि तपाईं आफ्नो स्टोर वा कार्यालय डिजाइन गर्न मदत गर्न एक पेशेवर किराया सक्छ.
तिनीहरूले एक कार्यालय पनि किनमेल जब वा ग्राहकहरु एउटा अनुभव खोजिरहेको. तपाईं स्रोतहरू छन् भने, यसलाई तपाईंको ग्राहकहरूको लागि एक अनुभव सिर्जना गर्न एक महान विचार छ. तर तपाईं अझै बाहिर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो ठूलो ग्राहक सेवा गर्न अझ महत्त्वपूर्ण छ.
कर्मचारीहरु कस्तो तपाईं जीवन तपाईंको व्यापार ल्याउन आवश्यक? परिवारका सदस्यहरु, मित्र, र व्यापार साझेदार बाहिर सुरु लागि ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ. वा तपाईंले थप कर्मचारीहरु फेला राखने प्रक्रिया हुन सक्छ. यो लामो प्रक्रिया हुन सक्छ, तर सही मान्छे प्राप्त गर्न समय लाग्न भने, यसलाई आफ्नो व्यवसाय को लागि लाभांश भुक्तानी गर्नेछ.
यसको मौलिक स्तरमा व्यापार उद्देश्य मूल्य को कुरा सिर्जना गर्न र मुद्रा को लागि विनिमय मानिसहरूलाई यो दिन छ. मार्केटिङ र बिक्री सञ्चार र आफ्नो ग्राहकहरु कि मूल्य निम्त्याउने को बस वाहन हो. तपाईं मूल्य को कुरा मान्छे चाहेको सिर्जना गर्नुभएको छ भने, तपाईं यसलाई पैसा बनाउने डराउनु हुँदैन. र, तपाईं उत्कृष्टता आफ्नो उत्पादन वा सेवाहरूमा छुटकारा यदि, अन्तर, र राम्रो ग्राहक सेवा, तपाईं मानिसहरूको आशा भन्दा बढी हुनेछ. तपाईं यसलाई गरिरहेको राख्न भने, तपाईं हरेक दिन थप ग्राहकहरु प्राप्त र आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न थप लाभ बनाउन र आफू र आफ्नो परिवारको हेरविचार गर्नेछन्.
व्यापार गरिरहेको कामकुराको के छ: यो मान्छे को सेवा र सँगसँगै आफ्नो जीवन शैली र आफ्नो समुदाय सुधार बारेमा. म तपाईंको व्यापार क्यारियर मा ठूलो सफलता इच्छा. अब, तपाईंको व्यापार सुरु जाने!
सिक्न कसरी एक व्यापार योजना लेख्न
बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न के तपाईंको व्यापार योजना समावेश गर्नुपर्छ